लिम्बुको घरबाट सुन चोरी..प्रहरी सुस्त,चाेर सक्रिय ! – Bihani Khabar
Home / Entertainment / लिम्बुको घरबाट सुन चोरी..प्रहरी सुस्त,चाेर सक्रिय !
लिम्बुको घरबाट सुन चोरी..प्रहरी सुस्त,चाेर सक्रिय !
पथरी/चाँडपर्व नजिकिन्दै गर्दा मोरङको कानेपोखरी–४ स्थीत नारायण चौकका दिलकुमार लिम्बूको घरबाट अपरिचित समूहले सुन लुटेका छन् ।शनिबार राती १२ बजे घरमा सुतिरहेको अवस्थामा पत्नी देउमाया लिम्बूले लगाएको माडवाडी एक जोर,कानढुङ्ग्री एक थान र बुलाकी १ थान गरी ४ थान गरी दुई तोला सुनको गहना लुटेर लगेको हो ।
टाँडे घरमा पती दिलकुमार भुइको खाटमा सुतेका थिए । लुटेराहरुले पती दिलकुमारको सिरानीको लाइट समेत बारीमा फ्याकिदिएका थिए । बिजुली गएको मौका छोपेर चोरहरु माथिल्लो तालामा माइली छोरी र आफु सुतिराखेको बेला नाक,कानको सुन तानेर चोर भागेको देउमायाले बताइन् ।
नाक र कान दुखेपछि उठेर हेर्दा लिस्नुबाट ओरलर्दै गरेको थियो, मान्छे होचो र गोरो सेतो भेस्ट लगाएको देखेको उनिले बताइन् । घरको बरन्डको खुल्ला कोठामा खम्बाबाट माथी चढेर रेलिङबाट पसेको र तल झर्ने लिस्नुको घोप्टे चोर्नु भन्दा पहिले खोलेकोले पूर्ब तयारी भएर आएर लुटन सफल भएको प्रहरी चौकी रमाइलोको असई केसीलाल राजधामीले बताए ।
चोर टाढाको नभएको र यस बारे अनुसन्धान भैरहेको तत्काल पत्तालगाएर कारबाही गरिने असई राजधामीले बताए । त्यसैगरी दुई हप्ता अघि नारायण चौकको यामुना किराना पसलमा चोरी भएको थियो । दुई पटक गरी बिभिन्न सामान र रकम गरी ४५ हजार बजारबरको सामान चोरी भएको पसल संचालक यमुना गुरुङले बताइन् ।
चोरी भए पछि प्रहरीमा उजरी समेत दिदा पनि प्रहरीले चोर पत्ता लगाउन नसकेको यमुना गुरुङले दुखेसो पोखे । क्षतिपुर्तिको लागी गाउँपालिकामा समेत उजुरी दिइएको थिए, आएर अवलोकन गरिकेको छ, पती बिष्णु गुरुङले बताए । गाउँमा देउमाया र बिष्णुकुमारी त उदाहरणका पात्र मात्र हुन । यस गाउँमा राती सुन लुट्ने गरेको सात बर्ष अधि देखिको छुट्टै कथा रहेको छ ।
सात बर्ष अघि देउमायाको छिमेकी सुनिल लिम्बूको घरमा पनि राती सुन चोरी भएको थियो । घरमा सुतिरहेको अवस्थामा सुनिल लिम्बूको पत्नी गोमाले लगाएको आधा तोलाको सिक्री लुटेर भागेका पती सुनिल लिम्बूले बताए ।
त्यस पछि दुई बर्ष पछि नारायण चौकका रुनादेवी लिम्बूको घरमा चोरी भएको थियो । रातको समयमा घरमा सुतिरहेको अवस्थामा रातको १२ बजेको समयमा रुनादेवीले कानमा लगाएको १ तोलाको एक जोड माडवारी थुतेर लगेको रुनादेवीको छोरो उदिप लिम्बूले बताए ।
त्यसैगरी त्यसको दुई बर्ष पछि नारायण चौककै माइतरानीको घरमा उहि किसिमले चोरी भयो । रातको १२ बजेको समयमा बरन्डमा झुल लगाएर सुतिरहेको अवस्थामा चोरले झुल काटेर माइतरानीले लगाएको १ तोला बराबरको मुन्द्री र बुलाकी नांकबाट थुतेर भागेको छोरा देबेन्द्र लिम्बूले बताए । माइतरानी लिम्बू अहिले स्वोर्गारोहण भइसकेका छन् ।
त्यसैगरी दुई बर्ष अघि देबेन्द्रको छिमेकी तिरसिंह राईकोमा पनि चोरी भएको थियो । तिरसिंह राईको पत्नी सुतिरहेको अबस्थामा उहि समयमा कानमा लगाएको चोरले ढुङ्ग्री तान्दा कान चियातिएको छिमेकी देवेन्द्र लिम्बूले बताए ।
माथीका घटनाहरु रुनादेवी लिम्बूको बाहेक सबै चाडपर्व अघि चोरी भएका हुन् । यस अघिका घटनाहर चोरी हुन थाले पछि गाउँमा मातृभूमि समाज सेवा क्लब र गाउँका युवाहरु मिलेर रात्री गस्ती पनि गरेका स्थानीय रमेश दाहाल बताउँछन् ।
एकै गाउँमा पटक पटक सुन चोरी हुनु र चोर पत्ता नलाग्नु भनेको यो प्रहरी प्रशासनको कम्जोरी भएको वडा सदस्य शिव दुलाल बताउँछन् ।
चोरी पछि प्रहरीलाई बोलाउने र प्रहरीले टिपोट लेखेर लाने अनि प्रहरीले प्रहरीमा निवेदन लगाउनुस हामी खोजी र्गछुम भन्ने त्यस पछि प्रहरी चुपचाप बस्नाले गाउँमा लुटेराहरुलाई राहत मिलेर पटक पटक गरेर चोरी हुने गरेको वडा सदस्य महेन्द्र गुरङ बताउँछन् । प्रहरीले गाउँमा गस्ती गर्दैनन्, त्यसैले गर्दा चोरको बिगबिगी बढेको स्थानीय उदिप लिम्बूले बताए ।
साभार :ब्लास्ट पत्रिका धरान बाट
Previous श्रीमतीले काटिन् श्रीमानको घाँटी
Next साउदीमा श्रीमानको मृत्यु, श्रीमतीले अर्कैसँग गएपछि भयाे छोराछोरीको बिचल्ली
ब्रिटिस लाहुरेको सपना बोकेर झिसमिस देखि डोको बोकेर दौडने युवाहरुलाई यो कुरा थाहा छ ? आँखा खोल्नुस “महत्वपूर्ण लेख”
त्रिशूली नदीमा बस खस्दा ज्यान जानेको संख्या ८ पुग्यो (अपडेट)
खुशीको खबर : कतारले विदेशी कामदारका लागि न्युनतम पारिश्रमिक तोक्दै